Golaha ammaanka qaramada midoobay oo kulan ka yeeshay khilaafka wabiga Nile | Star FM
Home Caalamka Golaha ammaanka qaramada midoobay oo kulan ka yeeshay khilaafka wabiga Nile
Golaha ammaanka qaramada midoobay oo kulan ka yeeshay khilaafka wabiga Nile
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bogaadiyay dadaallada midowga Afrika uu ku dhexdhexaadinayo dowladaha Masar, Suudaan iyo Itoobiya oo isku khilaafsan biya xireenka Itoobiya ay ka wado wabiga niilka.
Dowladaha Masar iyo Sudaan ayaa si wada jir ah uga codsaday golaha ammaanka in ay gacan ka gaystaan xallinta khilafaadka ka tagan arinkani kadib marki xukumadda Addis Ababa ay billowday wajiga labaad ee buuxinta kaydka biyaha iyadoo dhanka kale ka soo horjeedo in golaha ammaanku uu wax door ah ku yeesho khilaafka u dhaxeeya dowladahan.
Safiirka Maraykanka ku matalo qaramada midoobay ayaa dhankeeda sheegtay inay muhiim tahay helidda xal isku dheelitiran oo ay dhinacaydu ka gaaraan khilaafka wabiga.
Dowlada Itoobiya ayaa dhankeda sheegtay in dhismahani uu muhiimad gaar ah u leeyahay dhaqaalaheeda halka Masar iyo Suudaan ay ka walacsan yihiin inay waxyeelo soo gaarto biyaha ay ka helaan wabiga Niil.
Previous articleAustralia oo bandow saddex toddobaad ah ku soo rogtay magaalada Sydney
Next articleHaweeney shaqaalaysiisay qof been u sheega ayeeyadeed 13 sano, naxariis darteed